Cabdirisaaq Macalin Cilmi: 10/25/15
Waa Maxay Gabay?
Gabaygu waa tixo meerisyo ah oo maansada Soomaaliyeed qayb weyn ku leh.Isla gaadhka qoraalkan gaaban waxaan isku dayayaa inaan idiin sawiro siyaabaha gabaygu u dhismo.
Annigoo garabka saaraya laba hab oo kala ah:
1) Habka Qaafiyadda iyo 2) Habka Miisaanka Maansada:
1) Habka Qaafiyadda: Habkan waa hab qof waliba oo gabyi kara niyadiisa ku dhex xafidan. Maanso kasta ood magacawdo (ha ahaato: geeraar, jiifto, guurow, gabay, iwm) habkan ayey ku aroortaa.Habkan waxaa fure u ah “Xaraf-Raaca,” kaas oo hal xaraf maanasada lagu dhiso, qaafiyadna looga dhigo
.Qaafiyada gabayga badanaa labo goor iyo in kabadanba waa lagu arki karaa. Tusaale kooban oon tixo kala soo baxnay abwaano kala duwan tiriyeen:
Waxaa Qoray: Abdurazak Elmi Abbaare 03:24